प्रमुख नेताको चुनाव « Sansar News
रक्सीको कैयौँ पेग पिइसकेको थिएँ । म कहिले होश, कहिले बेहोशमा हुन्थेँ । टाढाबाट ‘कान्छा दाइ–जिन्दावाद ।’ जीत कसको – कान्छा दाइको । कान्छा दाइ कसको – जनताको । भन्ने नारा मेरा कानमा परिरहेका थिए । ‘रमेश बाबु । हिजोआज कसको विश्वास गर्ने । हजूर जस्तो महान् नेतालाई भोट नदिई कसले धोखा दिएको होला नि । एक भोटले मात्र हार भयो ।’
‘गद्दार को हो, पत्ता लगाउनु पर्छ ।’
चुनावमा हार भएको हुँदा सान्त्वना दिन आउने मेरा सहयोगीका थिए – यी शब्दहरु । ती शुभचिन्तक भनाउँदाहरु आइरहेका थिए, गइरहेका थिए । होशमा आएपछि कोठा रित्तो पाएँ । मेरो सामुन्नेको बोतल र गिलास पनि रित्तो थियो । दराजसम्म गई मैले जानीवाकरको अर्को बोतल झिँके । सोफामा फर्कि के अडेस लागेथेँ, सब घटनाहरु चलचित्र भैmँ मेरा सामु नाच्न थाले ।
प्रमुख नेताको चुनाव । कान्छा र म मात्र दुई जना उम्मेदवार थियौँ । एक्काईस जना मतदाताहरु थिए । दशजना कान्छाका पक्षमा थिए, एघार जना मेरा पक्षमा थिए । जित मेरो पक्का थियो । मेरो मत मेरै थियो । अरु दश जनालाई विभिन्न प्रलोभन र डर–त्रास देखाई आपूmतिर पारेको थिएँ । ममा धनको तागत थियो, शक्तिको तागत थियो । तर कान्छासँग यी सब केही थिएन, उ गरीव, अनपढ । उसमा के छ ? फेरि पनि सब उसको साथ किन दिन चाहन्छन् ?
घटनाक्रम थामियो, कतैबाट अवरोध भए जस्तो लाग्यो । जानीवाकरको विर्को खोली गिलासमा खन्याएँ । केही पानी हाली एक घुट्को लगाएँ । स्मृति अगाडि बढ्यो ।
कान्छाका सहयोगी मलाई भेट्न आएका थिए । उनीहरु कान्छालाई नै चुनावमा जताउन आग्रह गर्न आएका थिए । आफ्नो बानी अनुसार भाषण दिन थाले, ‘साथी हो, तपाईहरु ठीक भन्नुहुन्छ, कान्छोले यो ग¥यो, त्यो ग¥यो भनेर । तर तपाईहरुले केही विचार गर्नुभएको छ ?
म एम.ए. पास छु । सारा संसार डुलेको छु । अंग्रेजीमा बोल्न सक्छु, लेख्न सक्छु । कान्छाले आफ्नो नामसम्म लेख्न सक्दैन । उसले ल्याप्चे लगाउँछ, ल्याप्चे । उसले गरेको काम भन्दा म धेरै बढी काम गर्नसक्छु । तपाईहरुले देख्नु हुनेछ । भैगो, तपाईहरु जानुहोस् । मेरो मान्छेलाई फुटाउने कोशिश नगर्नुहोला । त्यसो गर्नुभयो भने ठीक हुने छैन, बुझ्नु भयो ।’ यस प्रकार उनीहरुलाई हप्काई पठाएँ । निराश भै सबै फर्केँ ।
स्मृति विस्मृतिको लुकामारी भइरहेको थियो । एक छिनका लागि फेरि मस्तिष्कमा शून्यता छायो । तर तत्कालै मलाई चुनावको दिनको सम्झनाले डो¥यायो ।
चुनावको दिन आफ्नो मत हाल्न म मतदान केन्द्रमा पुगेँ । मतपत्र मेरो हातमा थियो ।
मतपत्रमा मैले मेरो र कान्छाको नाउँ पढेँ । मतपत्रमा कान्छाको मुसुमुसु हाँसिरहेको तस्वीर देखा प¥यो । तस्वीरमाथि अर्को तस्वीर थपियो । यो तस्वीरमा कान्छाले आफ्नै गाउँ–घरका विरामीहरुको सेवा सुश्रुषा गरिरहेको थियो । तस्वीर फेरि फेरियो–अब कान्छाले कुनै विहेमा नाचेको, गाएको पाएँ । मेरो अन्तर्आत्माको द्वन्द्व समाप्त भयो । छाप कान्छाको मुखमा लाग्न पुग्यो । मेरो मत मेरै भएन । उ विजयी भयो, म हारेँ । केवल एक भोटले ।
दुनियाँ सबै खुशी थिए । म पनि खुशी थिएँ । आफ्नो खुशी लुकाउन अर्को पेग थपेँ, फेरि अर्को, फेरि अर्को थप्दै गएँ ।
लघुकथा : नो भोट
लघुकथा : अर्काको मान्छे
लघुकथा : उप–मेयरको टिकट
लघुकथा : काँचुली